အေ ဘီ စီ ဒီ မတတ်ပဲနဲ့……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အေ ဘီ စီ ဒီ မတတ်ပဲနဲ့…….
အေ ဘီ စီ ဒီ မတတ်ပဲနဲ့…….
Posted by naywoon ni on Jan 12, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary |3comments
အေ ဘီ စီ ဒီ မတတ်ပဲနဲ့
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသွားကျောင်ပြန် အော်ဆိုခဲ့ စာသားလေး ခု အင်တာနက်ပေါ်ရောက်တော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အတွေးထဲဝင်ဝင်လာတယ်။ ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်သား ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာသင်တန်းမှမယ်မယ်ရရ မတက်ခဲ့ပဲနဲ့ ဒီလိုဖြစ်အောင် အသဲအသန် လုံးပန်းခဲ့ရတာ ပြန်တွေးကြည့်ရင်တော့ရယ်ချင်စရာ ကောင်းနေတယ်။ 2006 လောက်က ဆရာကျော်ဝင်းရဲ့ ကမ္ဘာပြားပြီ ကိုဖတ်ပြိးကတည်းက ရူူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ ဒီအင်တာနက်ကို ။ ခုတော့ အတော်အတန် သိအောင် အသဲအသန်လုံးပမ်း ပြီးသကာလ ကိုယ်လျှောက်ခဲ့ရတဲ့ လမ်းကို ပြန်ကြည့်တော့ ဖြူးဖြူးဖြောင့်ဖြောင့်မရှိတာတော့အမှန်။ ဘယ်ဖြောင့်နိုင်ပါ့မလဲ။ ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ရတာက ဘာသာစကားအခက်အခဲ စကားလုံးစလုံးတွေ့လိုက်လို့မှ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိ။ စာအုပ်ထဲမှတ်ထား သူငယ်ချင်းကို ပြန်မေး။ သုံးနေသူချင်းမေး။ ဂျီတော့ထဲမှာမေး။ အားလုံးက စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်ဖြေတယ်များထင်နေရင် မှားသွားလိမ့်မယ်။ အနီးကပ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသာ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်ဖြေ ကိုယ်သိချင်တဲ့မေးခွန်းနဲ့ ဆက်နွယ်တာလေးတွေ ပြောပြ။ သူကကွန်ပြူတာနဲ့မစိမ်းသူဆိုတော့ တော်တော်တန်တန် တော့အားကိုးရသား ။သူနဲ့က9 တန်းထဲကအတူတူနေလာခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်လေးတော့ရှိရှားသား။ အလုပ်ကြောင့် ဆိုင်လိုက်မပြနိုင်ပေမဲ့ သူသိသလောက် တတ်သလောက်လေး ပြောပြ သင်ပြ လမ်းညွှန်ပေးလို့သာ။ ကိုယ်ကလည်း ဒီအပေါ်မှာ ရူးသွပ်ပြီး ကျားကုပ်ကျားခဲ လုံးပမ်းခဲ့တာလည်းပါတာပေါ့ ။ဒါကြောင့် အရေးကြုံလာသူဟာ ဘယ်ပညာမဆို သင်လို့လွယ်တယ်ဆိုတာ ။ဥပမာ -နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မမျှော်လင့်ပဲ ရောက်သွားသူဟာ အဲဒိဒေသရဲ့ ဘာသာစကားကို ကြိုးစားပမ်းစား သင်ရမှာပဲ။ ကိုယ့်စကားမှသူတို့နားမလည်ရင် သူတို့စကားတတ်အောင် သင်ရတော့မှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာလည်း ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ကိုယ် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆက်ဆံနေနိုင်သေး သ၍ ဘယ်ဘာသာစကားကိုမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မသင်ကြားခဲ့မိပါဘူး။ ဘယ်ကိုမှလည်း သွားလာဖို့ အကြောင်းမရှိတာရယ် တတ်အောင်သင်တဲ့သင်တန်းက နယ်မှာမရှိတာရယ် လည်းပါတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုဖော့ဖော့လေး တွေးပြီးကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဖိစီးမှုနဲအောင် နေတတ်လာတဲ့ အကျင့်ကိုပဲ မပြစ်ပြောရမလား။ အေ ဘီ စီ သုံးလုံးထဲနဲ့ ဆယ်တန်းအောင်လာခဲ့တဲ့
စနစ်ကိုပဲ လက်ညိုးထိုးရမလား မသိတော့ဘူး။ အေ ဘီ စီ သုံးလုံးနဲ့ ဆယ်တန်း အင်္ဂလိပ်စာ အောင်ခဲ့တာကတော့ အသေအချာပါ။
ကျွန်တော်က ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုးလို့ကန့်လန့် တွေချည့်ပဲ ။ တခြားမကြည့်နဲ့ဦး ကျောင်းနေရတာပဲကြည့် မွေးတာက နိုဝင်ဘာ ကျောင်းဖွင့်တာက ဇွန် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာ ငါးနှစ်မပြည့်သေးဘူး ။ နောက်နှစ်ကျတော့လည်းငါးနှစ် ကျော်သွားဦးမယ်။ အဲဒိတော့ အပျော် သူငယ်တန်းတက်ခဲ့ရတာ။ လေးတန်းအောင်တော့ ဆယ်နှစ်မပြည့်တတ်သေးဘူး။ ငါးတန်းရောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာစသင်ရတာ။ အဲဒိမှာ ကျောင်းဆင်းချိန်ကျရင် အထက်က ကဗျာလေးအော်အော်ပြီး ပြေးပြေးဆင်းရတာ အမှတ်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒါအဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ရောက်နေတဲ့ အချိန်ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကိုပါ။ ငါးတန်းရောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရတဲ့စနစ် ။ သိပ္ပံ ဝိဇ္ဇာ ပေါင်းလိုက်တဲ့နှစ်တွေ နဲ့သွားတိုက်နေတာပါ။ ပြိးတော့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုး တွေကကောင်းကော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ စာမေးပွဲ မေးခွန်း စနစ်က သင်ထားတဲ့
သင်ခဏ်းစားတွေပြန်မစစ်ဆေးပါဘူး။ ကျွန်တော် ကျောင်းတက်လာခဲ့တဲ့သက်တန်းတစ်လျှောက်လုံး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြဌာန်းစာအုပ်မရှိပဲ စာမေးပွဲအောင်လာခဲ့တဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ စာမေးပွဲစစ်ရာမှာ ပြဌာန်းစာအုပ်က သင်ရိုးတွေကို စစ်ဆေးတာမှမဟုတ်တာ ။ဟိုကွက်လပ်လေးဖြည့်ခိုင်းသလိုလို ။ ပက်တန်လေးရေးခိုင်းသလိုလို ။ စာကြောင်းလေးစီပေးရင်လဲ အမှတ်တွေရတာပဲ။ စာကြောင်းပြန်စီတဲ့မေးခွန်းကိုကျောင်းသားကြီးတွေက ဘယ်လိုသင်ညာ(ပညာပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ညာတာပါတေး နည်းသင်ပေးတာကြောင့် သင်ညာ လို့ သုံးလိုက်မိတာ အယ်ဒီတာများ စာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ဆိုပြိး လာပြင်မှာစိုးလို့ )ပေးတယ်ထင်သလဲ။ ဆိုလိုကောင်းတာအမှန်တဲ့ ။ကောင်းရော ……….ဆယ်တန်းနှစ်ကျတော့ပိုဆိုးသေးတယ်။ မေးခွန်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။ ပထမပိုင်းက ကွက်လပ်ဖြည့်တာတွေချည့်ပဲ။ အမှတ်60 တစ်နာရီတစ်ဆယ့်ငါးမိနစ်။ ကွက်လပ်ဖြည့်တာတွေရယ် စောစောကပြောတဲ့ အေ ဘီ စီ သုံးလုံးနဲ့ ဆယ်တန်းအောင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ အေ ဘီ စီ သုံးမျိုး ပေးထားပြီး အမှန်ရွေး ကွက်လပ်ဖြည့်ရတာတွေရယ်.. ဒါပဲ။ အဲဒါနဲ့အောင်မှတ်ရပြီးသား။ တတ်တာမတတ်တာအပထား။ စာတွေအများကြီး ခိုးကူးစရာကိုမလိုတာ။ နောက် တစ်ပိ်ုင်းက လေးဆယ့်ငါးမိနစ်စာမေးခွန်း အမှတ်လေးဆယ်.. ရှေ့ကအပိုင်းနဲ့တင်အောင်နေပြီ ဘယ်သူမှသိပ်ပြီး အလေးမထားကြပါဘူး။ အမှတ်ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့သူ လိုင်းဝင်ချင်တဲ့သူတွေကသာ ၊ကြိုးစားပမ်းစား အက်ဆေးတွေကျက် လက်တာတွေရေးကျင့်နဲ့။ နေဝန်းနီတို့ကတော့ ပုံစံလေးကြည့်ထားပြီး ရွှီးတော့တာ။ အဲဒါတောင်အောင်လာတော့ အင်္ဂလိပ်စာ51မှတ်ရသေးတာ ။ နောက်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ကော ။ ထူးမခြားနားပါပဲ။ ဆယ်တန်းတုန်းကမှ အိမ်ကိုကြောက်လို့ င်္အလိပ်စာ ပြဌာန်းချက်လေး ဝယ်ကိုင်သေးတယ်။ တက္ကသိုလ်လည်းရောက်ရော အင်္ဂလိပ်စာချိန်ဆို အပြင်ရောက်နေပြီ။ သူ့ဖာသူဘာသင်သင် ဘာတွေပဲ ပြဌာန်းပြဌာန်း မသိလည်း မေးခွန်း ပုံစံက စာမေးပွဲ အောင်အောင်နေတော့ သိပ်အပင်ပန်းမခံကြဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်ချိန်လာ သုံးချိန်လား တက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲပထမနှစ်ရောက်တဲ့နှစ်က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ စတဲ့နှစ်။ သူတို့ကတော့ မတက်လို့မရဘူး။ မေဂျာအားလုံး အင်္ဂလိပ်စာကလွဲရင် မြန်မာလိုသင်နေချိန်မှာ အဲဒိ အိုင်အာအိုင်အေနဲ့ အီးမေဂျာက တော့ မြန်မာစာဘာသာလွဲရင် အားလုံး အင်္ဂလိပ်လို ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားချင်းကိုခွဲခြားထားသေးတာ။ အဲဒိတော့မှ ဆယ်တန်းတုန်းကပေါ့ပေါ့လေးလုပ်ခဲ့တာတွေ..။ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ ဆရာမတွေကပြောတာကို ဘဝင်မြင့်ချင်တဲ့ ကျွန်တော် စာမေးပွဲ နီးမှ စာကျက်ခဲ့တာတွေ ခဏတော့နောင်တရသား။ ပြီးတော့လည်း ပြီးတော့လည်း ကျုံးနံဘေးက မန်းသီတာဥယျာဉ်ထဲမှာ ဘီယာသောက်ရင်း မေ့သွားတာပါပဲ။ ပညာရေးကိုအလေးအနက်ထားတာ ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက 18နှစ်မပြည့်သေးလည်း ဘီယာတို့အရက်တို့ ဆိုင်မှာထိုင်သောက်လို့ရတာ ကိုး။နော့ …ဒီတော့
ဲစောစောကအော်ခဲ့ စာသားလေးလို ပဲ
ဖိနပ်ခိုးတာနင်……လို့တော့မပြောပါနဲ့။ အေဘီစီသုံးလုံးတော့တတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တာပါ။ အော် ဒီကျန်သေးတယ်ဟုတ်လား?
ရယ်စရာလေးပြောရဦးမယ်။ ဆယ်တန်းနှစ်က ကျူရှင်လေးတွေ မှာ ရှေ့ကဆရာက ရှေ့က စာကြောင်းတစ်ကြောင်း ဖတ်ပြပြီး အေ အော် ဘီအော စီ ဆိုရင် နောက်က ကျောင်းသားတွေက အေ ဒါမှမဟုတ် ဘီ / စီပေါ့ ။လိုက်အော်ကြရတယ်။ အဲဒိမှာ နောက်တောက်တောက်ကျောင်းသားတွေက ဆရာကစောစောကလို အေ အော် ဘီအော စီ ဆိုရင် ဒီလို့အော်ပြီး ရယ်ကြပါတယ်။ အဲဒါလည်းကျောင်းသားဘဝ ပျော်စရာလေးတွေပေါ့လေ။ ရှေ့က သင်ရတဲ့ ဆရာခမျာမှာတော့ အောင့်သက်သက် ။ မေးခွန်းကလည်း ဒါတွေပဲ မေးတာဆိုတော့ တစ်ခြားဟာပြောင်းသင်လို့လဲမရနဲ့ ခုမှ ဆရာ့ကိုစာနာမိတာ။ ဟိုတုန်းကတော့ ရယ်စရာလုပ်ခဲ့တာလေ..။ အဲဒိတော့ အေ ဘီ စိ သုံးလုံးတင်မဟုတ်ပါဘူး ဒီလည်းပါပါသေးတယ်နော်။
နိုင်ငံခြား သွားမယ် ဆိုရင် အေ ဘီ စီ ဒီ လေးလုံး တင် မကဘူး နောက် ထပ် ၃လုံး သင်ပေးလိုက်မယ် yes no OK.. အလွတ်မှတ်ထားနော်..
လူတယောက်က ဘိုလို စာမတတ်လို့.. အဲဒီ ၃လုံး သင်ပေးလိုက်တယ်။
တနေ့ ဈေးဝယ်ထွက်ရင်း ဘေးနားမှာ သူခိုးက ဖြတ်သွားတာ လူမိမှာ စိုးလို့ ခြင်းတောင်းထဲကို ပစ္စည်း ထည့်ပြီး ပြေးတယ်။ ရဲက တွေ့တော့..
မင်း ဒီပစ္စည်း ခိုးယူထားသလား Yes
မင်း ငြင်းချင်သေးလား No
မင်းကို ဖမ်းစီး အရေးယူမယ် OK..
ဆွဲခေါ်သွားရော.. ပြန်ထွက်လာရင်တော့ ၃ခွန်းထက် မကတော့ ပို တက်လာမှာပါ။
နောက်တလုံးကတော့ ..Freeze! ပါ..။
အဲဒါကိုမသိလို့.. ဂျပန်ကျောင်းသားတယောက်… ယူအက်စ်မှာ သေနတ်နဲ့အပစ်ခံရပြီး သေဖူးတယ်..။
He was armed withaloaded and cocked .44 magnum revolver. He pointed it at Hattori, and yelled “Freeze.” Simultaneously, Hattori, likely thinking he said “please,” stepped back towards the house, saying “We’re here for the party.” Haymaker, seeing the weapon, shouted after Hattori, but Peairs fired his weapon at point blank range at Hattori, hitting him in the chest,
စာကြောင်းပြန်စီတဲ့မေးခွန်းကို ကျောင်းသားကြီးတွေက ”ဆိုလို့ကောင်းတာအမှန်” လို့ပြောတာ ဟုတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲက မမေးတာ မှန်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကိစ္စက သေချာဋီကာချဲ့ပြောမှ ရှင်းမယ်။ ဒီခေတ်ကလေးတွေ ကျွန်တော်တို့ထက်တောင် ပိုညံ့သေးတယ်။ ဖြတ်လမ်းကနေလိုက်လို့မရတာ အင်္ဂလိပ်စာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ladybird series အကုန်လုံးကို အလွတ်နီးပါးရအောင် ကျက်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါက မိဘကလည်း လုပ်ပေးနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် တစ်ကျောင်းလုံးမှာ အင်္ဂလိပ်စာထိပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။ မိဘက ဖိဖိစီးစီးလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေ ခံရတာပါ။ ဒီခေတ်နဲ့စာရင် ဟိုခေတ်က ပညာရေးပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။